Istudiyo esitsha esitsha kumbindi weGoreme - I-Airbnb
Istudiyo esitsha esitsha kumbindi weGoreme
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguBuket
Indawo entsha ye-50m2 yamatye yabucala kumbindi weGöreme. Indawo yokungena yabucala, igumbi lokulala elinebhedi enkulu, igumbi lokuhlambela labucala, ikhitshi elincanyathiselweyo kunye negumbi lokuhlala elinescreen esisicaba seTV, iWiFi kunye ne-air conditioning.
Indlu yestudio ayizange ibe yinto emnandi kangaka!
Le ndawo intsha yestudio yelitye ibekwe kumbindi weGoreme kwaye iya kuba likhaya elifanelekileyo kude nekhaya.
Ukudibanisa izinto zendalo: iinkuni kunye nelitye. Ineefestile ezininzi, idala i-studio evulekileyo eqaqambileyo.
⭐︎ Ibhedi enkulu enemiqamelo ekumgangatho ophezulu, iduvet kunye neelinen
⭐︎ Igumbi lokuhlambela eligcweleyo elinamanzi ashushu kunye nentloko yeshawari enoxinzelelo oluphezulu
⭐︎ Ikhitshi enesinki, ifriji, i-oveni yemicrowave, iketile yombane, umenzi wekofu, itoasta, itop yokupheka, izinto zokupheka kunye nesidlo sangokuhlwa.
⭐︎ Umgangatho womgangatho womthi oqinileyo
⭐︎ Ukufudumeza okuphakathi
⭐︎ Umoya womoya
⭐︎ Iseti yeTV yescreen esisicaba kunye namajelo aphesheya
⭐︎ Itafile yokutyela kunye nezitulo
⭐︎ Iitawuli zomqhaphu ezisemgangathweni (itawuli yokuhlamba, itawuli yesandla kunye netawuli yomgangatho)
⭐︎ Indawo yokupaka yasimahla kwizakhiwo
Akukho mpahla yempahla endlwini kodwa ukuba ufuna umntu oza kukucocela ngeli xesha ulapha oku kungalungiselelwa ngeendleko ezongezelelweyo.
Yongeza uluhlu lwam kuluhlu lwakho lweminqweno ngokucofa i ♠️ kwikona ephezulu ngasekunene.
4.91 · Izimvo eziyi-85
Isitudiyo sisembindini weGoreme, yimizuzu emi-2 kuphela uhamba ukuya kwisikhululo sebhasi. Ikufuphi neevenkile, iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela kunye neevenkile zekofu.
Ijikelezwe ziintlambo kunye neetshimini ezininzi, i-Goreme yintliziyo yeKapadokiya ngokweendawo zokutyelela. Nangona ibizwa ngokuba ‘yiGoreme’ njengesiqalekiso, ukuba nje wonke umntu ebenokuya eKapadokiya aze awubone lo mhlaba mhle!
Imimangaliso yendalo idibana neemfihlakalo zembali kanye kweli nqanaba, Goreme. Iphakathi kweendawo ze-UNESCO zeLifa leMveli leLifa leMveli, ezinombono wayo okhethekileyo, umoya ongaqondakaliyo kunye nezinto zakudala, ezithi 'ungafi ungandibonanga' indawo yokuhlala phezulu kuluhlu 'ezingenakulibaleka ukusuka eKapadokiya'.
Imyuziyam ye-Goreme Open Air ikumgama oziikhilomitha eziyi-1.6 kuphela, enye yezona ndawo ziphezulu onokuzibona e-Goreme kunye neLifa leMveli leHlabathi le-UNESCO ukusukela ngo-1985.
Umbuki zindwendwe ngu- Buket
Ndilapha ngenxa yakho ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa inqanaba lethu lokusebenzisana likuwe. Nditsalela umnxeba/umyalezo kuphela. Ndiza kukunika iingcebiso ezingcono kwaye ndiya kukunceda ulungiselele ukhenketho kunye nemisebenzi ngamaxabiso angcono kunye neenkampani ezihloniphekileyo: iinqwelomoya zebhaluni yomoya oshushu, i-jeep safari, uhambo lwembali, ukhenketho lwabucala, izifundo zokupheka...
Ndilapha ngenxa yakho ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa inqanaba lethu lokusebenzisana likuwe. Nditsalela umnxeba/umyalezo kuphela. Ndiza kukunika iingcebiso ezingcono kwaye ndiya k…